Dib udajin - UNHCR Su-aalaha badanaa la isweydiiyo
Su-aalaha badanaa la isweydiiyo
Sideen ku caawin karnaa?
<< Ku noqo bogga su’aalaha la isweydiiyo
Waa maxay dib udejin?
Dib-u-dejintu waxay ku lug leedahay si ikhtiyaari ah, badbaado leh oo nidaamsan oo dadka u baahan badbaadin caalami ah looga wareejiyo waddanka ay ka diiwaangashan yihiin (ha ahaato UNHCR ama masuuliyiinta dawladda ee martida loo yahay) waddan kale oo oggolaaday in loo oggolaado qaxooti ahaan.
Dib-u-dejinta waxaa loogu talagalay xalka muddada-dheer. Waxaa laga yaabaa inay u fidiso wadiiqad ay qaxootiga ugu dambayntii ku noqon karaan muwaadiniin dalkooda cusub, in kasta oo hawshu qaadan karto dhowr sano. Qaxootiga la dajiyay waxaa lasiiyay xaquuq shaqo iyo waxbarid, helitaanka daryeel caafimaad iyo adeegyada kale ee bulshada, iyo taageerada lagama maarmaanka u ah kaqeybgalka bulshada deegaanka, oo ay kujirto fasalo luuqadeed.
Ma dalban karaa dib udejin?
Qofna ma dalban karo dib udejin.
UNHCR waxay cadeysaa dadka halista ugu badan ugu jira waxyeelo daran wadanka ay ka diiwaangashan yihiin, iyo waliba wadankooda hooyo, badiyaa sababo la xiriira hanjabaado noloshooda, xorriyadooda ama badqabka jirkooda, ama xadgudubyo kale oo daran oo xuquuqda aadanaha ah. Khatarahaan waxaa la qiimeeyaa marka laga jawaabayo baahiyaha gaarka ah ee shakhsiyaadka iyo qoysaska, iyadoo la tixgelinayo tixgelinta duruufaha deegaanka, helitaanka ilaalin sharci iyo jir ahaaneed, helitaanka adeegyada la xiriira, rajada laga qabo in si nabad ah loogu laabto dalkooda iyo mabda’a ah midnimada qoyska.
Haweenka, ragga, gabdhaha iyo wiilasha waxaa loo tixgelin karaa dib udejin, iyo sidoo kale shakhsiyaad jinsi ama jinsi kaladuwan, dadka naafada ah, shakhsiyaad aan wadan lahayn iyo kuwa kale oo lagu qiimeeyo inay ubaahanyihiin ilaalin caalami ah. Waxyaabaha ay ka midka yihiin dhalashada, isirka, fikirka siyaasadeed, caqiidooyinka diinta, waxbarashada, khibradaha shaqada iyo luqadda ma khuseeyaan in UNHCR ay tixgelin doonto dadka dib u dajinta iyo in kale.
Dib udejintu xaq maahan. Wadamada dib udajintu waxay bixiyaan kootooyin xadidan, oo macnaheedu yahay in qaxootiga badankood aan loo tixgalin karin dib udejin dal kale xitaa hadii UNHCR ay aaminsantahay inay lagama maarmaan u tahay ilaalintooda ama dib ula midoobida xubnaha qoyskooda. UNHCR waxay mudnaanta siin doontaa kiisaska degdegga ah si loogu gudbiyo waddan dib udejin ah. Qaxootiga ma dooran karaan wadanka ay UNHCR weydiisan doonto inay qadarkooda tixgaliso, in kasta oo ay xaq u leeyihiin inay go aansadaan inay doonayaan iyo in kale dib u dajin.
Sideen ku ogaadaa haddi aan haysto kiis dib udejin?
Haddii kiiskaaga loo tixgeliyo dib udejin, UNHCR ayaa kula soo xiriiri doonta. UNHCR way kula soo xiriiri doontaa inta lagu jiro heerarka kala duwan ee howlaha dib udejinta. Waa muhiim inaad u sheegto UNHCR haddii aad bedesho lambarka taleefankaaga ama aad u guurto cinwaan kale.Dhammaan adeegyada ay bixiso UNHCR, oo ay ku jiraan dib u dejinta, waa lacag la’aan. Haddii qof kale ku weydiiyo inaad lacag ku bixiso dib-u-dejinta, fadlan ku wargeli dhacdada UNHCR https://www.unhcr.org/making-complaint.html
Macluumaadkaaga shaqsiyeed oo ay kujiraan magacaaga, macluumaadka taariikh nololeedkaaga iyo sababaha lagugu tixgelin karo inaad ubaahantahay badbaadin caalami ah waxaa ilaaliya siyaasada UNHCR, lamanala wadaagi doono wadamada dib udajinta adigoon ogolaan.
Ayaa sameeya go’aanka ugu dambeeya ee kiiskeyga dib udejinta?
UNHCR waxay cadeysaa dadka laga yaabo inay u baahan yihiin dib u dejin waxayna wareysi la yeelataa si ay u soo ururiso macluumaadka ay u baahan doonto dal dib u dajin ah. Si kastaba ha noqotee, go’aanka ugu dambeeya ee ah in loo aqbalo ama loo aqbalo qof dib u dejin ahaan qaxooti ahaan waxaa sameeya mas’uuliyiinta dowladda ee waddamada dib-u-dejinta oo ma ahan UNHCR.Wadamada dib udajinta sidoo kale waxay adeegsadaan shuruudo iyo siyaasado cayiman oo ka hor istaagi kara UNHCR inay u gudbiso noocyada kiisaska qaarkood.
Haddii kiiskaaga aan loo gudbin wadan dib udejin ah, hadii lagugula taliyo inaadan hada xaq u lahayn dib udejin, ama hadii wadan dib udejin ah go’aansado inuusan kuu ogolaan qaxooti ahaan, markaa UNHCR waxay sii wadi doontaa inay ku bixiso caawimaad iyo ilaalin wadanka halka aad hada ka diiwaangashan tahay ilaa iyo inta ay UNHCR tixgelineyso inaad u baahan tahay magangalyo caalami ah.
>> Xulo waddan ku yaal boggayaga Caawinta